INTEE IN LE'EG CUNTO KARINTA CAANAHA: SIDA LOO KARIYO DIGSI, MA U QAADAN KARAA RUGTA? - KHUDRADDA
Noocyada iyo waxyaabo waxtar leh
Xaddiga borotiinka iyo fiitamiinada, hadhuudhka caanaha ayaa ka horreeya noocyo khudaar ah oo aad u dhaqso badan oo ka badan hilibka. Waxyaabaha miisaaman ee isku-dheelitiran ee macdanta waxaa ka mid ah fosfooraska, potassium, copper, birta, glutamic acid iyo walxo kale. Tan iyo wakhtiyadii hore Badeecada ayaa si ballaaran loogu isticmaalay daawada dhaqameed ee daaweynta cudurrada soo socda:
suuxdin iyo dhibaatooyin kale oo leh nidaamka dareenka;
Isticmaalka joogtada ah ee cobs waxay caawisaa nadiifinta jirka walxaha waxyeelada leh, sunta, hagaajinta xasuusta, dhisida murqaha, iyo kahortaga horumarinta kansarka. Laakiin muhiimada ugu weyn ee macdanta ayaa ah inay sii haynayaan guryahooda xitaa ka dib marka daaweynta kulaylka.
Intaa waxaa dheer, in hadhuudhka caanaha loo isticmaalo kareemka jirka, iyo nafaqo-yaqadadu waxay kugula talinayaan cunista cuntada sida ugu badan ee suurtogalka ah, maxaa yeelay waxay kor u qaadeysaa baruurta.
Dareen u yeelo! Ka ilaalinta isticmaalka hadhuudhku waa dadka qaba dhiig-xinjirowga dhiigga, dhiig-xinjirowga iyo dulqaadka qofka.
Sababtoo ah maadada fitamiin K ee badeecaddu waxay kordhisaa khatarta xinjirta dhiigga iyo kobcinta awoodda dhiigga si ay u burburaan.
Waa in aadan cunin badeecadda inta lagu jiro sii xumeynta xanuunka gastritis, cudurka cayayaanka ee cudurka boogaha iyo xanuunada caloosha iyo mindhicirka.
Ogaanshaha sida loo kariyo hadhuudhka caanaha ee guriga, waa in aad marka hore go'aan ka gaartid sida ay uga duwan tahay dhalinyaro, qaan gaar ah ama ka gudubtay, haddii kale natiijadu ma noqon karto raaxo casiir leh, laakiin wax adag oo qallalan iyo inta jeer ee la kariyo hadhuudh la karkariyey oo laga badiyay, halkan ka akhriso). Ugu horreyntii, u door bido in aad adegsatid miraha wax yar oo hurdi ah ama midab caano ah. Waa inay noqdaan kuwo jilicsan oo isla weyn, isla mar ahaantaas, iyada oo aan lahayn qolal iyo waxyeelo kale oo muuqata.
Waxaa muhiim ah in la baadho caleemaha on the cob - dhoobo iyo qulqulaya ayaa tilmaamaya in badeecaddu tahay mid taagan. Sidoo kale Waa lagama maarmaan in la joojiyo iibinta hadhuudh haddii:
caleemo ka dambeeya cobs;
madaxa kala jabay oo gudaha ku jira oo aan midab lahayn;
hadhuudh waa la iibiyaa iyada oo aan caleemo lahayn
Dhinaca kale waxay muujineysaa in dhaqanka lagu daaweeyay sunta cayayaanka, iyo cagaarka cagaaran ee la yareeyay natiijada kiimikada ayaa la jaray, sababtoo ah waxay ka dhigeysaa wax soo saarkeeda.
Si loo tuuro wixii shaki ah, waxaa lagula talinayaa xilliga doorashada madaxyada si ay u sameeyaan tijaabo sahlan - ku cadaadi farta ku taal mid ka mid ah maaddada saliida. Haddii si sahlan loo burburiyo loona sii deyn casiir, ka dibna waxaad ku haysataa gacmahaaga dhagaan cusub, oo caan ah. Qulqulka iyo adkeeyo abuurka, tayada ka sii dareysa alaabta.
Qoraalka. Qodobo badani waxay lumiyaan qoyaankooda, foomamka dhumucduna iyaga ayaa ku jira iyo wax muuqaalkuna u muuqdo, sidaa daraadeed maahan wax cunto ah. Caano sidoo kale waxay leeyihiin dhadhan macaan iyo casiir.
Faahfaahin ku saabsan inta la karinayo hadhuudhkii hore, si ay u noqoto mid jilicsan oo casiir leh, waxaan u sheegnay maqaalkan.
Si aan qalad u sameyn inta lagu guda jiro xulashada, fiiro gaar ah u yeelo qaabka iyo dhererka madaxyada - alaab wanaagsan ayaa yareyn doona mana ka badnaan doono 15 cm ee cabbirka.
Ka dib markii la doorto cobs, waa in loo diyaar garoobo geeddi-socodka diyaarinta iyo halkaan fikradda badan ee guryaha la-kashaqeynayo.
Qaar waxay jecel yihiin inay karkariyaan ama ku dubaan badeecada si buuxda loo caleemo saaray caleemaha, qaarna ka saaro oo keliya qaybo wasakh ah ama ha ka qaban dhammaan, sababtoo ah stigmas iyo cagaarka cagaaran waxay siinaysaa hadhuudh dhadhan gaar ah (waxaad ka ogaan kartaa sida dhadhankiisu u yahay inuu kariyo hadhuudhka koollada iyo inta uu u baahan yahay in la kariyo halkan). Si kastaba ha noqotee, marka la kariyo, dhammaan qaybaha xad-dhaafka ah ayaa laga saaraa si aad u liita, sidaas darteed waxa ugu wanaagsan in la isla markiiba kala sooco. Ka hor inta karinta, waxaa lagugula talinayaa inaad raacdo talooyinka soo socda:
iskuday inaad karkariso kobo isku mid ah, haddii kale waxba iskuma kari karno;
Kaabashka weyn ayaa ugu wanaagsan in la gooyo qaybo dhowr ah (guud ahaan);
ka hor inta aan la karinin, waxaa lagu talinayaa in lagu qooyo hadhuudhka illaa saacad biyo qabow si aad uga dhigto hanti badan;
safka ugu sarreeya ee miro la gooyey ayaa u baahan in la gooyo, haddii ay jirto.
Maxaad u baahan tahay iyo meesha aad ku bilaabi lahayd?
Hadda Habka caadiga ah ee cunto karinta ee kariyaha ayaa ah kuwa ugu caansan.sababtoo ah waxaa loo tixgeliyaa sida ugu fudud uguna dhaqsaha badan. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay digsi qotodheer iyo qoto dheer oo leh hoose oo dherer ah, dheriga birta ama caarada.
Saabuunta waa inay ahaataa dabool adag oo fiiqan - tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad karisid wakhti gaaban. Haddii badeecada loo diyaarin doono foornada, markaa waa in martigeliyaha waa inuu ku yaallaa waraaqda dubista, foornada ama xaashida.
Bilowga habsocodka, caleenta iyo dhaleeceynta ayaa laga saaraa dhagaha.
Kadib wax walbana waa lagu dhaqaa biyo qabow.
Kadibna waxaa lagula talinayaa in la gooyo hadhuudhkii oo dhir udgoon ama isla markiiba ku rid saxanka kaas oo la kariyo.
Caawin Looma baahna in la degdego si aad u tuurto caleenta iyo antennae - waxay dabooli karaan hoosta hoose ee digsiga, oo daboolaan alaabta si ay uga dhigaan mid ka sii dara.
Sidee loo kariyaa guriga cunto kariyaha
Nidaamkan fudud ee fudud ee aad u baahan tahay:
biyaha (qiyaastii 3 litir);
Xajka iyo caleemaha ayaa ka soocaya madaxyada, ka dibna waa la maydhaa oo la dhigaa hoose ee digsiga.
Geli hadhuudhka dusha sare, ku shub biyo ka dib, dabool dabool kuna dabool dabka yaryar. Hubi in badeecada si buuxda loogu daboolay dareeraha inta lagu jiro karinta.
Ka dib markii la isku karkariyo boorsada hadhuudhka ilaa 15-20 daqiiqo. Waqtiga karintu wuxuu si toos ah ugu xiran yahay xajmiga cobska, sidaas awgeed marwalba hubi miro, isku day inaad u dhadhamiso. Sidaa darteed, waa inay noqdaan jilicsan, casiir leh oo si sahlan loo cuno.
Dhamaadka hawsha, biyaha waa in la nadiifiyaa, iyo cobsiyada lagu dhajiyo saxan caag ah, oo lagu rusheeyey milix aan qalafsaneyn oo lakabiyey subag subag (optional).
Caawin Khubaro badan oo khubarada ah ayaa kugula talinaya in aysan ku darin biyo, haddii hadhuudhka caanaha la kariyo, sababta oo ah maadada waxa ku jira 80% dareeraha.
Salt wuxuu awoodaa inuu dardar galiyo qoyaanka iyo dhamaadka badeecaddu dhammaato ma aha mid aad u casiir leh. Haddii aad rabto in cobsadu noqoto wax yar, waa inaad cusbo ku dartaa habka karinta.
Faahfaahin ku saabsan sida iyo inta la cuni karo hadhuudh cusub, halkan ka akhri, iyo qodobkan waxaad arki kartaa cuntooyinka lagu kariyo suxuunta sonkorta sonkorta.
Sida loo karsado hadhuudhka caanaha:
Khubarada qaarkood waxay aaminsan yihiin in cuntada caydhu ay hayso habka waxtarka leh, sidaa daraadeed, waxaa lagula talinayaa in ay siiso hab door ah oo kaliya. Saddexda qaybood ee aad u baahan tahay:
cobs - 3 pcs;
Qadar yar oo biyo ah ayaa lagu shubay digsi qoto dheer, ka dib marka dambiisha loo geliyo foorno ama saabuunta birta. Waa muhiim in la hubiyo in dareeraha uusan taabanin dambiilaha!
Biyaha waxaa la keenay karkar, ka dibna cobsii horay loo diyaariyey ayaa la dhigey oo digsigana waxaa daboolay dabool.
Ka dib 10 daqiiqo ka dib, hadhuudhku wuxuu noqonayaa jilicsan waana la cuni karaa.
On sida ugu dhakhsaha badan u kariyo hadhuudhka ah ee a boorsada double, waxaan u sheegay in wax noo.
Habkani ma aha wax caan ah sida kariska, laakiin waxa uu ka dhigaa midhaha tufaaxa iyo aromatic badan. Rootiyada oo dhan ama midho ayaa lagu shiidi karaa brazier, fryer qoto dheer, dab iyo qaboojiye. Waxay qaadan doontaa:
cobs - 4 pcs;
saliidda cuntada - 20 ml;
Iska ilaali digsi qaboojin leh hoose oo kulayl dhexdhexaad ah, ka dibna la shiisho koollada loo diyaariyey saliidda cuntada (5 daqiiqo dhinac kasta).
Ka dibna ku shub qiyaastii 200 ml oo biyo ah oo sii wad si aad u walaaqdo badeecada kulaylka yar illaa dareeraha gebi ahaanba ka baxo (la'aan la'aan).
Isku-diyaari la diyaariyey subag iyo rusheeyey milix.
Qoraalka. Haddii aad fry cob ah u jarjartey, geedi socodku wuxuu qaadan doonaa 20 daqiiqo.
Diyaarinta hadhuudhka ku jira baakadka:
Ka hor inta aanad karin karin, hadhuudh la kariyey waa in lagu qooyay biyo qabow muddo saacad ah.
Ka dibna waa in la geeyaa bac balaastig ah, isaga oo ku daraya dhowr qaado oo biyo ah, kuna xir dhammaan wax adag.
Si aad u oggolaato in kuleylka si xor ah looga tago, godadka yaryar waxaa lagu sameeyaa xirmada.
Diyaarso badeecadda 10-15 daqiiqo oo ah mikrowave awoodda ugu badan.
Ka hor inta aan la isticmaalin, waxaa la nadiifiyaa caleenta iyo lakabyo subagga.
Baro raashinka kale ee loogu talagalay wax lagu kariyo hadhuudhka meerkuriga halkan.
Waayo, hadhuudhka udgoon wuxuu u baahan yahay:
qudaar iyo subagga;
Bilowga hore ee karinta waxaad u baahan tahay inaad foornada u celiso ilaa 200 darajo.
On sheet sheet greased leh saliid qudaar ah, cobs unpeeled yihiin la dhigay iyo badh ka buuxsamey biyo.
Kadibna wax walba waa in lagu daboolaa weelka oo isku kari ilaa 40 daqiiqadood.
Ka hor inta adeegaya, hadhuudhka waa la nadiifiyaa caleemaha, cusbayn iyo la shiiday saliidda cuntada.
Sidee kale ayaad u karin kartaa hadhuudhka foornada, iyo sidoo kale arag cuntooyinka suxuunta, waxaad halkan ku dari kartaa.
Qarsoodiga ugu weyn ee kaydinta saxda ah ee hadhuudh la kariyey waa in uu jecel yahay qoyaanka. Sidaa darteed cobsadu waa inay ku qaboojiyaan biyaha ay ku jiraanhaddii kale, waxoogaa ka dib ayaa miro-dhaliyadu ay hoos udhigi doonaan oo ay lumiyaan muuqaalkooda cuntada. Sida ugu dhakhsaha badan marinka qabow, waa lagama maarmaan in dheriga la geliyo qaboojiyaha, taas oo u oggolaan doonta in alaabta la dhigo 2 maalmood.
Dalagyada caanaha ayaa si wanaagsan ula socda cuntooyin badan waxaana loo adeegaa sida saxan dhinaca ama macmacaanka. Xaaladda dambe, waxaa lagu suuxay ma cusbo, laakiin sonkorta. Wax kasta oo aad cunto karinta aad doorato, natiijadu waxay hubaal ka dhigeysaa qof kasta oo dhadhan aan dhadhan lahayn, isaga oo raacaya xeerarka asaasiga ah ee xulashada cobsyada iyo u hoggaansamida talooyinka khubarada.